Ukuhamba ngebhayisi kwindawo yokuhlamba kunokukhulula kwiikhilogram eziliqela, utyutywe i-fat and ulahlekelwe yi-cellulite. Kuphela kuyimfuneko ukwenza konke kwisayensi - ukukhetha iinkqubo ngokuxhomekeka kwiinjongo nothando kumaqondo aphezulu. Kubathandi be-sauna kunye ne-bathhouse, sibonisa inqaku elikhethekileyo ngesihloko esithi "Yiyiphi i-sauna eyenza ioli ibe ngcono".
I-Saunas kunye namabhafu azinakulungelekanga. Iinkqubo ezitshintshileyo ziya kunceda ukulahlekelwa iipounds ezimbalwa. Kubalulekile ukuba uqonde ukuba ukushisa ngokwabo akutyhili i lipids: ngokukrazula i-kilogram-elinye ibhinqa ngexesha lokuhlamba iyanyanzelekile ukuba ikhukhumele. Kodwa ukungcola amanzi akuyona indlela efanelekileyo yokulahleka kwesisindo. Yingakho kuyimfuneko ukuzalisa ukulinganisela kwamanzi - phakathi kokutyelela kwigumbi le-steam, uphuze iitayi zamanzi kunye namanzi. Nangona kunjalo, imfihlelo eyintloko yefuthe eliphezulu lokushisa kunye ne-steam kwi-figure ibonakala ekupheliseni iziganeko eziqhubekayo kunye nokusetyenziswa kweenkqubo zetekisi, eziza kuqhutyelwa ngokukhawuleza xa zixhaswa nge-massage, i-wraps, okanye i-whipping nge-broom. Ukuqiniswa kwe-lymph flow flow will say "to" a "peel orange". Ngako oko, umhla wokuhlamba unakho ukukhuphisana ngokusebenza kakuhle kunye neenkqubo zeronon. Ngendlela, kwezinye iiklinikhi zezonyango imimiselo ifakwe kwinkqubo yokulungiswa kwesisindo, nakwi-anti-cellulite. Ukongezelela, iinkqubo zokuhlamba zivuselela kakhulu, zikhuthaze kwaye zinciphise uxinzelelo: kunye ne-sweat, i-toxins, i-slags kunye ne-lactic acid, iqabane lokukhathala kunye nesizathu sobuhlungu emisipha emva koqeqesho, sisuswa emzimbeni. Yingakho kuwo onke amaziko enempilo kukho i-saunas: ukufudumala emva kweseshoni exakekile - kwaye ngosuku olulandelayo awukhumbuli nakwiimisipha ezisebenzayo!
Fumana ukuba yiyiphi i-sauna eyitshisa kakhulu inqatha, qalisa kuqala i-sauna yendabuko yesiFinnish. Iqondo lokushisa eliphambili kwigumbi le-steam, ngokubhekiselele kwizizwe ezisentla, kufuneka lilingane no-80 ° C. Umoya kwi-sauna yomele ngokwaneleyo (unokufafaza ngamatye ngamanzi ukuze igumbi le-steam lizalise i-oil oil flavour), ebangela ukujuluka okukhulu. Imizuzu eyi-15 yokuhlala ilahleka kwi-1.5 ilitha yobumanzi. Imishubo kule bushushu ayimkelekile: unokufumana ukutshiswa. Kodwa uhlale phantsi okanye ulala phantsi - nceda. Ngeli thuba umzimba uya kufudumala, iinqwelo ziza kwandisa, i-pores iya kuvula. I-epidermis iqala ukuphefumula, igazi liza kunika zonke izitho nge-oxygen kunye nezondlo. Into ephambili ayiyikuphosa umzuzu kwaye uhlambe isithukuthezi esiye savela, ungayivumeli yome, mhlawumbi isikhumba siza kufumana zonke iibhox.
Ukuba ugqiba ukugqiba usuku lokulunga kwigumbi lomqhubi kwaye ufuna ukufumanisa, musa ukukhawuleza kwi-sauna ngqo emva kweeklasi. Emva kokuqeqeshwa, umzimba ufudumala, kwaye ukufudumala okongezelelweyo, ukwandisa umthwalo kwindlela ye-cardiovascular system, kuya kubachaphazela kakubi impilo. Ukuba ixesha livumelekile, emva kokufaneleka, kufuneka uphumle kwimitha engama-20 ukuya ku-30, uthathe ishafile eshushu, uphuze amanzi. Ukutyelela ekamelweni lomqhubi kufuneka kuthathwe mfutshane, kungekhona ngaphezu kwemizuzu engama-7. Iqondo eliphantsi kwalo liphantsi kunesiFinnish, ukususela kuma-60 ukuya kuma-80 ° C, kodwa uhambo oluya kwigumbi le-steam alulula ngenxa yobuncwane. Ngombulelo wesithuthuthu esivela emzimbeni womzimba uhamba ngokukhawuleza, umzimba uphuthuma ngakumbi, kodwa ugcino olucwangcisiweyo luba lukhulu ngakumbi, oko kuthetha ukuba iinkqubo zokuxilonga zihamba ngokukhawuleza. Into ehlukileyo yokuhlambela yaseRashiya kunye nokutshiza ngomshanelo. Ngendlela, ama-broom anempahla ehlukileyo: i-oki ivuselela iinkqubo ze-metabolic, i-birch ihlambulula isikhumba samanzi, i-currants ilahle i-cellulite. Ingxenye ebalulekileyo yokuhlambela yaseRussia-ukubhukuda edameni ngamanzi abandayo. Ubushushu obushushu buguqula umzimba, obangela ukwanda okukhulu kweekhalori. Kuphela ngokutshintshwa kwamaqondo okushisa kukufanele ukuzama ukunyamezela: akuyiyo yonke inkqubo ye-cardiovascular system. Impembelo emva kokuba iinkqubo ezahlukeneyo zokuhlambela iRussia ziza kuqhubeka iiyure ezingama-4-5. Njengoko emva kwe-cardio enamandla, ngeli thuba kuyacetyiswa ukuba usebenzise umbane ngakumbi, kwaye ubaleke ukutya okunzima. Ngaba ufuna ukwazi ukuba yimuphi umzobo we-cartoon uYury Norshtein ozivelayo? Tyelela i hammam. Amanzi okuhlamba aseTurkey afanelekileyo abo bangenako ukunyamezela iibhafu zaseRussia kunye ne-saunas. Iqondo lokushisa kwi-hammam liphantsi kakhulu - akukho ngaphaya kwama-45-50 ° C. Amabhentshini ekuhlambela ayenziwa ngeemabula, kwaye iindonga ziboshwe, kodwa ilitye alizwa libandayo. I-steam epholileyo, iqhuma emoyeni, iyancipha umzimba kwaye igcwalise iiseli ngobumanzi, inceda ukususa i-toxins. I-Cosmetologists ikholelwa ukuba i-hamam - isisombululo esihle kwi-cellulite. Emva koko, imigaqo yendabuko imele iquke i-foam massage, i-peeling ize ifakwe! Isosa yokuzihlamba eyaziwayo iqhutshwa i-viscose mittens. Ngethuba le nkqubo, iingxaki ziyagqitywa, zonke izihlanganisi, umlenze uyakulula - kodwa umzimba okhululekile unokubona lula unyango lwezonyango.
Ukuba i-hammam ayinzima ukuyifumana namhlanje, i-yurophu yaseJapan iyinarity. Futhi akayisebenzisi imfuno ekhethekileyo: kungekhona wonke umntu oza kukhwela ukunyuka kwi-vat kunye namanzi ashushu, phantsi kwesitofu. I-European alternative yuro, eyenziwe kwiAltai, yinto ebizwa ngokuba ngumsedare. Ngaphandle lifana nenkolelo yaseJapane, kodwa ayizalwanga ngamanzi, kodwa nge-steam. Le mini-sauna. Ziphela kuphela ezizongena kuwo, kungekhona ngokupheleleyo, kodwa esifubeni. Ngehora, bangena emgqeni kathathu ngemizuzu eyi-10. Kwikhefu phakathi kweefowuni, njengama-saunas yendabuko, basela itiye kunye nokusila. Iintlobo zomthi womsedare yinto yokuba intloko ihlala ikhona ngaphandle, kwaye kuphela umzimba okhulile. Oku kukuvumela ukuba unciphise umthwalo entliziyweni kwaye ungenzi ukuphefumla nzima, okusoloko kwenzeka kwibhayinti yemveli kunye ne-sauna. Kodwa umzimba uphelela ngokugqithiseleyo, kwaye ukuxilisa kuqhube ukunyuka kwenkqubo yokulahlekelwa ubunzima. I-sauna yaseJapan iyayazi njani i-sauna ye-infrared. Kufana ne-Finnish, kodwa iqondo lokushisa ekamelweni likhululekile (45-65 ° C), ngenxa yokuba umzimba ufudumala ngemilayezo ye-infrared. Engabonakaliyo, ingena ngaphaya kwe-5 cm. Impembelelo ye-thermal inkulu kangangokuthi ukujuluka okuqinileyo kuqala phakathi kwemizuzu emi-5. Isiqingatha seyure kwi-sauna ye-infrared 600 iikhalori zitshiswa! Nangona kunjalo, ngenxa yempembelelo ekhawulezayo, umntu akahlali ekwazi ukubona ukugqithisa ngexesha. Kwaye emva kweeseshoni ezininzi, isikhumba sinokuhamba.
Iimbangela ze-cellulite kunye nonyango
Ngenxa yintoni enye i-cellulitis kunye nendlela yokulahla ngayo?
Ukunyuka kwama-honey to combat cellulite
Indlela yokukhetha i-nail polish efanelekileyo
Amanxeba aphucukileyo: unyango ngeendlela zabantu
I-steaks kwisesame kunye ne-rosemary
I-Horoscope ngoDisemba 2017 - owesifazane uDeva - waseTamara Globa no-Angela Pearl
I-Mackerel "yavutha" ekhaya
Umntwana onokubetha, indlela yokunyanga?
Unqamle amaqanda ezinyamekweni
Inkukhu ipake nge mifuno
Intlanzi kwi-almond-coffee "ingubo"